Alex Telles Oo Soo Gaadhay Magaalada Manchester Oo Uu Tijaabada Caafimaadka Ugu Marayo Man United - Gool24.Net
Alex Telles Oo Soo Gaadhay Magaalada Manchester Oo Uu Tijaabada Caafimaadka Ugu Marayo Man United
Waxa magaalada Manchester kasoo degay difaaca bidix ee reer Brazil ee Alex Telles oo tijaabada caafimaadka u maraya kooxda kubadda cagta Manchester United oo £18 milyan oo Gini kaga soo iibsatay FC Porto.
Heshiiska labada kooxood ku kala iibsadeen laacibkani ayaan si rasmi ah loogu dhawaaqin, hase yeeshee waxay United iyo Porto isla qaateen in £18 milyan oo Gini uu Alex Telles ugu wareego Red Devills.
Sida uu sheegay wargeyska The Sun, Alex Telles ayaa soo gaadhay magaalada Manchester xalay fiidkii, waxaanu tijaabada caafimaadka mari doonaa isla maanta si inta aanu suuqa iibka ciyaartoydu xidhmin si rasmi ah loogu soo bandhigi doono garoonka Old Trafford.
Manchester United ayaa la sheegay inay laacibkan ka bixinayso lacag dhan £18 milyan oo Gini iyadoo kor u qaadday lacagtii ay hore ugu dalbatay ee laga soo diiday.
Solskjaer oo ayaa saxeexa Telles u leexday markii lagaga guuleystay Sergio Reguilon oo Tottenham ku biiray.
Laacibkan ayaa 49 kulan oo uu u saftay FC Porto xili ciyaareedkii hore waxa uu u dhaliyey 13 gool iyo 12 kale oo uu caawiye ka noqday, taas oo ah wax ay baahi weyn u qabto inay hesho laacibkan oo xataa waxqabadkiisu ka sarreeyo ciyaartooyo badan oo afka hore ee weerarka ka ciyaara.
Dadka aqoonta u leh Telles ayaa waxay ku sheegeen ciyaartoy ku wanaagsan difaacista iyo weerarka intaba, waxaanay Porto go’aansatay inay iibiso markii uu diiday inuu u kordhiyo heshiiskiisa oo sannadkii ugu dambeeyey u socdo.